Trump oo baajiyay booqashadiisii dalka UK - Worldnews.com
Trump oo baajiyay booqashadiisii dalka UK
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa baajiyay booqashadii la sii qorsheeyay ee uu ku tagi lahaa UK bisha Feebaraayo, wuxuuna sheegay in uusan "taageeraysanayn" safaaradda cusub ee Maraykanku uu ka dhistay London, taas oo la qorsheeyay in uu isagu furo.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa la filayay in uu furo
"in fikraddaasi ay ahayd mid xun"
Trump oo la filayo in uu UK booqdo sannadka cusub
Safiirka Maraykanka u fadhiya Britain ayaa sheegay in uu filayo in Donald Trump uu soo booqan doono UK sannadka cusub, inkastoo ay dhawaan soo foodsaartay labada dhinac...
Madadaxweynaha Maraykanka oo booqanaya UK 2018ka
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayay u badan tahay in uu sannadka soo socda booqdo UK, sida ay BBC-du fahamsan tahay. Aqalka Downing Street ee UK laga maamulo...
BBC News 2017-07-11
Labo ruux oo maxkamad loo soo taagayo in ay qorshaynayeen dilka Theresa May
Labo ruux ayaa galinka dambe ee maanta ka soo muuqan doona maxkamadda Westminster Magistrates iyaga oo loo haysto in ay maleegayeen sidii ay ku dili lahaayeen...
BBC News 2017-12-06
Wiil kusoo biiray qoyska boqortooyada Ingiriisnka
Wiil cusub ayaa kusoo biiray qoyska boqortooyada Ingiriiska, waxaana wiilkan dhashay xaaska amiirka leh dhaxaltooyada ee Amiir William, oo uu isaga laftiisa dhalay wiilka...
BBC News 2018-04-23
Ammin hore oo Khamiistii ah ayay saraakiil Maraykan ah u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP in la qiyaasayo in qabashada dhoolatus kaas ay ku kici doonto 92 milyan oo...
BBC News 2018-08-17
Haweenay maxkamadi ka diiday in ninkeeda looga fasaqo farxad la'aan
Haweenay doonaysa in ninkeeda laga furo, iyadoo sabab ka dhigaysa in aysan ku faraxsanayn ayay maxkamad sare ka diiday racfaan ay gaysatay. Tini Owens oo 68 jir ah oo ka...
Haweenay maxkamadi ka diiday in ninkeeda looga fasaqo farxad la\_'aan
Haweenay doonaysa in ninkeeda laga furo, iyadoo sabab ka dhigaysa in aysan ku faraxsanayn ayay maxkamad sare ka diiday racfaan ay gaysatay. Tini Owens oo 68 jir ah oo ka soo jeeda deegaanka Worcestershire ee dalka Britain ayaa doonaysay in maxkamaddu ka fasaqdo ninkeeda oo ay afartan sano is qabeen. Maxkamadda sare ayaa isku raacday diidmada racfaankii ay soo gudbisatay,...
Walaac laga muujiyay booqashada dhaxal sugaha Sacuudiga uu ku tagayo UK
Dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa booqasho saddex maalmood ah ku tagi doono Ingiriisaka iyadoo dibadbaxyo la qorsheeyay oo looga soo horjeedo dalkiisa doorka uu ku leeyahay dagaalka ka socda Yemen . Maxamed bin Salman oo 32 jir ah ayaa dadka qaar waxay u arkaan in uu si khasab ah u casriyeeynayo dalka sucuudiga. Waxaa la filayaa in uu wada hadal la yeesho ra'iisalwasaaraha UK,...
Israa\_'iil oo qorshaynaysa in ay Qudus ka dhisto khad tareen oo "Trump la dhoho"
Wasiirka gaadiidka ee Israa'iil ayaa sheegay in uu doonayo in uu sameeyo khad tareen oo dhulka hoostiisa mara kaas oo laga samayn doono qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus. Boosteejada tareennada laga raaco ee laga samaynayo agagaarka darbiga ay Yuhuuddu barakaystaanna loogu magac dari doono Donald Trump. Yisrael Katz ayaa sheegay in uu doonayo in uu ku sharfo madaxweynaha...
Ra\_'iisulwasaare ku xigeenka Britain oo shaqada looga eryay marin habaabin
Damian Green oo ka mid ah xulafada ay isugu dhaw yihiin ra'iisulwasaaraha Britain Theresa May ayaa shaqadii ra'iisulwasaare kuxigeennimada laga eryay ka dib markii lagu helay in uu ka tallaabay anshixii golaha wasiirrada. Waxaa la waydiistay in uu is casilo ka dib markii lagu helay in uu "been iyo haddallo marin habaabin ah ka sheegay" waxa uu ka ogyahay eedaymaha sheegaya in...
Trump oo Ra\_'iisulwasaaraha Britain ku weeraray Twitterka
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Ra'iisulwasaaraha Britain Theresa May u sheegay in ay diiradda saarto argagixisada UK ka dib markii ay ku dhaliishay in uu sii faafiyay muuqaalo ay Muslim nacayb ku jiraan oo ay baahiyeen qolyaha garabka Midig. "Ha igu mashquulin ee diiradda saar kooxaha argagixisada ah ee xagjirka ah ee kharbudaadda ka wada Boqortooyada Ingiriiska,"...